IINGCAMANGO ZOKULALA EZILOFT EZILOFT (IMIFANEKISO YOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKULALA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokulala Iingcamango zokulala eziLoft eziLoft (Imifanekiso yoyilo)
Iingcamango zokulala eziLoft eziLoft (Imifanekiso yoyilo)
Ezi ngcinga zokulala kwigumbi eliphezulu zinokukunceda ufumane uyilo olufanelekileyo kwigumbi lakho lokulala. Ukuhombisa nokucwangcisa uyilo lwefanitshala lwamagumbi okulala aphezulu kunokuba ngumceli mngeni ngenxa yolwakhiwo olwahlukileyo. Apha ngezantsi ufumana iindlela zokuyila ezingaphakathi kunye nabanini bamakhaya benza uyilo lwakamgangatho ophakamileyo lokulala kwaye ufumane ugqozi lokudala igumbi oza kulithanda.
Kulo mfanekiso ungasentla, imiqadi evulekileyo, imibhobho, udonga lwezitena kunye nemigangatho eqinileyo yomthi inika le loft uphawu lwayo lwe-rustic kunye nesitayile. Ikhaphethi yesilika eyakhiwe ngesandla inceda ukucacisa indawo yokulala. Iifestile ezinkulu zeglasi zinceda ukukhanyisa ukuva kwesithuba kunye nokuvumela ilanga elaneleyo likhanye kwigumbi. Ngokongeza isipili, sonyusa ukubonakaliswa kokukhanya kulo lonke igumbi. Kwimfihlo, iifestile ezihloliweyo kunye neemfama ezenziwe ngomthi ziyafakwa. Isakhelo sefestile somthi esiqinileyo, ibhodi yentloko eyenziwe ngomthi kunye nesiphunzi somthi kudala indawo ekugxilwe kuyo kule ndlu.
Ukutshintsha kunye nokuhombisa indawo encinci enjengeloft kunokuba ngumceli mngeni, kodwa kunokuba yinto emnandi. Igumbi lokulala egumbini eliphezulu linoluhlu olubanzi lwamathuba oyilo lokubonisa ngokwakhiwa kwalo okukhulu, ukwakhiwa kunye nendawo evulekileyo. Ezo mpawu zenza ukuba ezi ndawo ziphakamileyo zibe zezodwa, zinomdla kwaye zinomdla; kodwa, inokudala imingeni ethile yoyilo. Akukho zinkxalabo, nantsi apho singaluncedo khona; ngokwabelana ngezixazululo zoyilo kunye nemibono malunga nendlela yokujongana nemicimbi yokuyila eqhelekileyo onokuba nayo.
Uninzi lwabanini makhaya bathathelwa ingqalelo zizithuba ezincinci okanye ezendlela yokuchaza indawo yokuphakama ukuze isebenze njengelinye igumbi elongezelelekileyo, okanye indlela yokuseka iloft njengenxalenye yekhaya.
iindlela ezihlekisayo zokubuza iintombi zitshatileyo ukuba zibekhona emtshatweni wakho
Inyathelo lokuqala kukuvavanya ukufaneleka kweloft ukuba iguqulwe ibe ligumbi elongezelelweyo. Okulandelayo kukumisela ukuphakama kwentloko esele ikho; elisebenzisekayo kufuneka libe likhulu kune-7 leenyawo. Emva koko, chaza i-angle angle; ukuba une-engile ephezulu ye-pitch, kunokwenzeka ukuba uya kufuna ukuphakama kwentloko ephezulu. Emva koko, qinisekisa uhlobo lwesakhiwo sophahla; Nokuba uphahla lusebenzisa uhlobo lwesiko olwenziweyo, olunesakhelo esingaphezulu kolwakhiwo okanye uhlobo lwecandelo elenzelwe umzi-mveliso kwaye lifuna igalelo elikhulu kulwakhiwo.
Okulandelayo kukuchaza isithuba, ungaqala ngokuyila iqonga elilula ngokusebenzisa iipateni zephantsi ngokudibanisa izinto ezahlukeneyo ezinje ngeethayile, i-laminated okanye i-hardwood imigangatho. Unokusebenzisa indawo yombhoxo okanye iikhaphethi ukuseka indawo ethile. Ukongeza iindonga kunokunceda ekuchazeni iindawo ezahlukeneyo ezisebenzayo, njengokufaka izikrini okanye ngokuxhoma iipaneli okanye amalaphu. Iikhaphethi, iiragi, amalaphu anokukunceda ukufezekisa ulawulo lwesandi kwii-lofts apho isandi sinokubhabha njengebhola ye-ping-pong.
Isithuba sokugcina kubaluleke kakhulu ukuba sibe naliphi na igumbi kwaye i-loft ayikho. Nangona kunjalo, ixesha elininzi igumbi le-closet yile nto iloft ibonakala ngathi ayinandawo ngaphandle kwayo yonke loo ndawo inkulu ivulekileyo. Isisombululo silula, yenza into esebenzayo kwaye kwangaxeshanye isongeza uyilo oluthile kunye nomlinganiswa kwigumbi. Ukufaka iishelufa zokuxhoma iimpahla kunye nelinen yokubeka impahla, ukwenza iibhloko zokugcina ukufihla ezo zinto zingqubanayo kwaye kwangaxeshanye zisebenze njengefanitshala. Ukuthetha ngefanitshala, khetha ezo zinomsebenzi wokugcina ezinje ngeebhedi zeqonga, iikhabhathi ze-buffet, isifuba sedrowa okanye ifenitshala eyenziwe ngokwesiko ephindwe kabini njengokugcina kwaye kwangaxeshanye inokuba yindawo ekugxilwe kuyo kwigumbi. Ngokususa ukungqubana, wenza ukuba ubenendawo enkulu kunye nokuphumla okungcono.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule sisikali okanye ubungakanani befanitshala; Qiniseka ukuba iyangqinelana nomthamo wendawo ekuloft yakho. Soloko uthathela ingqalelo ukuphakama kwesilingi. Musa ukoyika ukusebenzisa ifanitshala enkulu okanye imisebenzi yobugcisa yempembelelo enkulu. Gcina ukhumbula ukuba isikali kunye nemigca kubaluleke kakhulu. Sebenzisa izixhobo zoqobo zokwakha esele zifunyenwe sele zikho njengodonga lwezitena, umthi onzima okanye imigangatho yesamente kunye nomsebenzi we-duct okanye iiplanga.
Enye into ebaluleke kakhulu ukuba uyithathele ingqalelo ekwenzeni uloft oluhle luhlobo lweefestile onokukhetha ukuzifaka. Izibane zophahla, iidormer windows, isibhakabhaka okanye isibhengezo sebalcony zezinye zeembono kunye nokhetho olufumanekayo kuwe. Musa ukoyika ukungenisa ukukhanya, kuya kuvula igumbi lakho lokulala kwaye kuyenza indawo ibonakale inkulu. Ukuba kukho ukunqongophala kokukhanya kwendalo, ungasoloko ufaka izibane ezifihliweyo, udonga okanye izibane ezijingayo. Ngalo lonke ixesha thabatha umoya olawulwayo ukuze ugcine umoya usempilweni.
Uninzi lwabaqulunqi bangaphakathi bacebisa imibono yokulala kwigumbi lokulala elihamba ngombala ozolileyo nopholisayo. Ukungathathi hlangothi ngoku kuhlela indlela yabo ebuyela kuhlobo lweetshathi zemibala. Ukufumana umthunzi ofanelekileyo kunokudibana kakuhle kwaye kusebenze kakuhle, ngaloo ndlela kuyila umoya ococekileyo kunye nowokumema. Inokwenza nokuba ezona ndawo zincinci ziziva zikhululekile, ziqaqambile kwaye zinempilo.
Siyathemba ukuba ingqokelela yethu yeefoto iya kukunika ngakumbi kubunzulu bemibono yokufezekisa indawo entle entle. Thatha ithuba lokuyila iikhonsepthi ezingezantsi kwaye ukhumbule ukuba akukho mda kwingcinga yakho kwaye ubonise isitayile sakho esahlukileyo.
Le loft ye-cabin epholileyo isebenzisa ulwahlulo oludongeni oluphezulu, ukufaka udonga kwikhaphethi yodonga kunye nomnyango odala kwaye uchaze indawo eyahlukileyo yokulala yabucala. Ifestile yebhalkhoni ivumela ukujonga indawo ethatha umoya kunye nokuvumela ukukhanya okwaneleyo kwendalo ukuba kukhanye imini yonke. Uphahla oluphezulu luvumela umoya ukuba ujikeleze ngcono. Esona sisombululo sisona sihle kwaye sigcina uloft ekubeni yindawo nje yokugcina.
Indawo ephothiweyo yekhonkrithi enemisebenzi ye-duct ebonakalayo ibonisa uyilo loyilo lweshishini. Umgangatho oqinileyo womthi wenza ukuba igumbi liziva lihle kwaye lifudumele. Imigca yendawo isetyenziselwa ukuchaza iindawo ezahlukeneyo ezinje ngendawo yokulala kunye nendawo yokufunda / yeofisi. Akukho sidingo sobugcisa obuninzi eludongeni ukusukela ukuba le mifanekiso mikhulu iifestile kunye nebhalkhoni ivumela ubuhle bendalo ngaphandle ukongeza izinto zokugqibezela kule loft yanamhlanje.
Uyilo lwedolophu yecawa enkulu
Ezi windows zinkulu zepaneli ezaziwa kakhulu njengezibhanyabhanya yenye yeenguqulelo ezisisiseko zewindow. Ezi ntlobo zeefestile zilungiselelwe ngokulula kuphahla olukhoyo kwaye azidingi kuguqulwa kakhulu kolwakhiwo. Ipateni yomgangatho womthi ekugqityeni kwethoni ekhanyayo inika eli gumbi imvakalelo efudumeleyo kunye nopholile. Kwakhona, indawo yombhoxo ichaza indawo yokuhlala yale ndawo iphakamileyo ebanzi. Ukugqitywa kodonga lwe-rustic kudityaniswa kakuhle kunye nokugqitywa kokujonga okudala kwefenitshala ukudala uyilo loyilo lwasemaphandleni.
Le loft yaguqulwa yaya kwindawo entle yokulala yabantwana abafikisayo. Umbhede uyaphindeka njengendawo yokuhlala abahlobo xa befika bexhoma. Kukho ukugcinwa okukhoyo phantsi kwebhedi kwempahla. Iimodyuli zentsimbi ezimodyuli zinika ugcino olongezelelweyo ngaphandle kokuyekisa uyilo. Udonga olusisigxina kunye nezixhobo zongeza uphawu kule ndlu yokulala yabaselula.
Igumbi lokulala langoku elineplani yomgangatho oguqukayo, njengoko ixesha lihamba linamagumbi okulala kwindawo esemazantsi ngelixa iloft inendawo yokuhlala kunye nekhabhathi. Iiplanga zomthi ekugqityweni kwethoni ephakathi zibonwa zibandakanyiwe kumgangatho nakwisilingi. Oku uyilo lokulala ikhululekile kwaye isebenzise kakuhle ukuphakama kwesilingi.
Nalu olunye uhlobo lwangoku lokulala kwigumbi lokulala eliphezulu linendawo yokuhlala ephezulu; Ukudibanisa kwakhona uyilo olucwangcisiweyo lomgangatho. Oku kulungele ukonwabisa iindwendwe kwaye kwangaxeshanye kubonelela ukubuyela kwindawo yabucala ngakumbi. Uyilo loyilo kunye nocwangciso lwenze ukuba abanini bandise indawo kangangoko kunokwenzeka kunye nokusebenza okukhulu.
Uhlobo lweMeditera oluphefumlelweyo loft luguqulelwa kwigumbi lokulala. Uyilo lubonisa intsimbi ebunjiweyo izinyuko uthuka , ifanitshala yeplanga inyuselwe kubungakanani begumbi eliqhelekileyo kwisikimu yoyilo lweMeditera. Imibala engathathi hlangothi yakudala isetyenziselwa ukubonisa imeko yeMeditera, ukudala imvakalelo efudumeleyo kunye nokuphumla. Phezulu yenye indawo ekungcono ukhululeke kuyo ngakumbi ukuba ungumthandi wencwadi okanye ukonwabela ikomityi yeti okanye ikofu.
Oku igumbi lokulala langoku I-loft ibandakanya ukuhonjiswa ngentsimbi eluphahleni, kwibhodi yentsimbi eyenziwe ngesiko kunye nemisebenzi ye-duct ebonakalayo. Ukukhanya komthi okutyhidiweyo, ukutyibilika kombala kunye nebala lendalo kumnyango wokhuni ophelisa ukubanda kwentsimbi kwaye kunika eli gumbi ubushushu obufudumeleyo nobonwabisayo. Isikimu sombala esingathath'icala, izixhobo ezincinci kunye nendawo yokugcina eyaneleyo yenza ukuba igumbi libonakale likhulu, lihlale kamnandi kwaye lingaxinani.
Eli gumbi lokulala loft ligxothiwe kwigumbi lokuhlala eliphambili ngokudibanisa iingcango zeglasi ezibiyelweyo. Umgangatho wekhonkrithi ophuma kwindawo yokuhlala enkulu ukuya kuthi ga kwigumbi lokulala ubuyekezwa ngokufakela udonga kwikhaphethi yodonga. Bona Okuninzi imibono yokudibanisa igumbi lokulala Apha.
Oku uyilo lokulala lothando ngodonga lwezitena lwerustic, udibana nebhedi ethambileyo kunye neyobunono yeeposti ezine ezinophahla. Phakathi kwezitena ezingenabugcisa kunye nomthi oqinileyo obonakalisiweyo, yindawo eleleyo yokulala apho amaphupha azalisekayo. Hlanganisa kwaye utshatise izinto ezinje ngomgangatho wokhuni olinganiswe yindawo yombala ojika indawo yokuphakama ibe yindawo entle nesimemayo. Ifestile enkulu yemifanekiso ivumela ukukhanya kwendalo ukuba kugcwalise kwaye kongeze umdlalo ngakumbi kule loft.
Igumbi lokulala lanamhlanje linesitayile esincinci. Iindonga ezimhlophe zakudala kunye nophahla omhlophe ogqityiweyo ulungelelaniswe ngumgangatho omnyama womgangatho wokhuni kunye nezinto zokuhombisa ezimnyama kunye neelinen zebhedi. Ifenitshala iyalinganiswa nokuphakama kwentsimbi. Loft enesitayile iguqulwa yenziwa kwigumbi lokulala elinamagumbi avulekileyo ajonge kwigumbi lokuhlala eliphambili apha ngezantsi.
Igumbi lokulala lala maxesha elihle linombala opinki ngombala omfusa kunye nomhlophe olinganise udonga olusondeleyo. Izimvo zegumbi lokulala eloft kunye nezibhakabhaka ziya kunceda ukongeza ukukhanya okufunekayo. Kweli gumbi iwindow ekhanyayo ikuvumela ukuba ujonge inkwenkwezi ngaphambi kokuba ulale. Igumbi lokulala eliqhelekileyo livulelekile kwigumbi lokuhlala elingezantsi. Isibuko sibonakalisa ukukhanya kwendalo, okwenza igumbi likhanye kwaye liziva likhulu.
I-Trendy make-over iguqule le loft ephezulu kwigumbi lokulala elivulekileyo kunye nesuti yomculo ejonge kwindawo yokuhlala ephambili nakwipatio engaphandle. Iingcango zeglasi zepaneli kunye nefestile engezantsi zingenisa ukukhanya okungokwemvelo okuya kufikelela kwigumbi eliphezulu. Uphahla lomthi oluhlanganiswe nophahla luyinto eyoyikekayo koluyilo loyilo. Ukukhanya okungathanga ngqo okungathanga kuphela kukukhanya okufunekayo kwesi sithuba esinceda ukuthoba ukuphakama kwesilingi kancinci. Indawo yekhaphethi ichaza indawo eyahlukileyo kwaye yongeza ubushushu kunye nokufudumala. Ndwendwela eli phepha ngeendlela ezininzi zokujika igumbi lokulala kwigumbi lokulala .
Ngokudibanisa ithoni yobubanzi beplanga ebanzi ephakathi kunye nokuveza imiqadi yeplanga eqinileyo kule ndlu yokulala ifanelekileyo, kudala ubushushu kunye nokulingana eludongeni lweefestile. Ecaleni kodonga lweefestile kukho isahlulelo sephaneli yeglasi esahlula indawo yekhabhathi. Igumbi lokulala eliphefumlelweyo elinesitayile esincinci esinegrey egxininisayo yodonga eyakha umoya ozolileyo kunye nokugubungela.
Udonga olumhlophe olwenziwe ngezitena, izibane ezihonjisiweyo ze-Edison kunye nodonga olwenziwe ngesiko olwenziwe kabini njengebhodi enentloko enesitayile esenza igumbi lokulala eliphambili. Isibuko esikhulu esenziwe ngomthi esiboniswe ecaleni koncedo sibonisa ukukhanya kwaye senza igumbi libonakale likhulu.
Imibono yegumbi lokulala eloft nazo zonke iindonga zomthi akufuneki ukuba ziyadika. Esi simbo sentaba siphefumlelweyo sophahla lwendlu egumbini lokulala sisebenzisa ithuba lophahla oluphezulu kunye nokukhanya kwesibhakabhaka ngaphezulu kwebhedi kunika umbono olungileyo endlwini. Ifestile yeglasi emiselweyo ivumela ukukhanya kwendalo ngakumbi ukuba kukhanye kwigumbi. Umgangatho webhodi yentloko eyenziwe ngokwezifiso ibonelela ngendawo yokugcina eyongezelelweyo kunye nenye ifanitshala kwigumbi lokulala. Umgangatho okhanyayo womgangatho wokhuni kunye ne-shaggy yendawo yombhoxo yongeza ucoceko kwindawo. Izixhobo zala maxesha, izixhobo kunye nesibane sokukhanyisa ikhandlela sikhuthaza uyilo loyilo lwe-eclectic.
Eli loft langoku kunye nesitayile liguqulwe laba yifayile ye- igumbi lokulala eliyindoda Iimpawu ezikhethiweyo zepeyinti emhlophe yeendonga zezitena, ukukhanya kwefestile, ukukhanya kwodonga oluhleliweyo kunye neshelfu esisigxina yendawo yokugcina ethe kratya, umgangatho ophakathi wokhuni, ifenitshala yokhuni kunye nezinto zokusebenza. Udonga lwezitena lwale loft luvulela imeko yobugcisa kwigumbi lokuhlambela eligcwele ishawa kunye nebhafu. Inkqubo yoyilo ebalaseleyo enomoya opholileyo kunye noxolo.
Izimvo zekhitshi kwisiqithi esiphambili
izipho zomamazala onento yonke
imibono emnandi yokwamkela umtshato
ucwangcisa njani umtshato kuhlahlo-lwabiwo mali
r kunye b iingoma zomculo